Taratasy vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo ho an'ny fanontana banga
Ny lamba vita amin'ny silipo vita amin'ny silika ho an'ny fanontana vavahady dia novolavolaina sy novokarinay orinasa izay natokana hanohanana ny fanontana vavao araka ny fangatahan'ny tsena.
Ny lamba vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo ho an'ny fanontam-pirinty dia singa iray lehibe amin'ny milina fanodinana vovoka, hisy fiatraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny sarimihetsika sy ny fampiasana ny vidin'ny press press.
Taratasy vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo vokarin'ny fanontana ataon'ny orinasanay dia mampiasa akora hafarana nafarana avy any ivelany, mampiasa teknolojia famokarana faran'izay tsara sy fitaovana teknolojia mandroso, ny fanoherana ny hafanana avo lenta, ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny harafesina, ny hamafiny, ny fahafaha-avo, ny tsy misy poizina ary ny tsy mandoto, tsy misy tsirony , ary fitaovana tsy miraikitra amin'ny tany tsy mitongilana, noho izany dia ilay ravina manify manjelanjelatra fanerena banga.
Hery matanjaka (Mpa)
Herim-pitomaniana(N / mm) hamafin'ny(Shore A)
KXM21 6.5 26 60 ~ 75 450 fotsymangarahara Milamina ny lafiny roa
KXM22 9.0 32 50 ~ 70 650 Graymangarahara Milamina ny lafiny roa
fonosana silipo an'ny masoandro dia vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo avo lenta amin'ny presse vulcanizing type-drum na press volozy araka ny fangatahana samihafa avy amin'ny mpividy. Izahay dia miankina amin'ny fandrosoana mandroso, teknika manavao ary ny fifehezana kalitao henjana miaraka amin'ny fitaovana sy milina vita amin'ny silika tena tsara, mamaha ny olan'ny faritra ambany kokoa sy ny fandeferana avo lenta amin'ny milina fanodinkodinana ROTOCURE, ary koa mamaha ny olan'ny sakany, ny halavany ary mpiray hita eo amin'ny milina fanaovana volo fanaovan-gazety. Fandresena amim-pandresena tsy misy fiaraha-miasa ary miaraka amin'ny halavany tsy manam-petra eo ambanin'ny hatsarana voalaza etsy ambony. Manana ny presse vulcanizing karazany mahery amponga izahay miaraka amin'ny sakany 4000mm ary vokatra avo lenta 3600mm ny sakany tsy misy mpiray. Silety avo lenta avo lenta miaraka amin'ny fahombiazan'ny fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny ozon, fanoherana ny hafanana, fanoherana herinaratra, fanoherana solika, fanoherana ny solvent, fanoherana ny harafesina, tsy misy poizina ary tsy misy tsirony, tsy misy loto. Miasa amin'ny rivotra, rano, solika ary mpanelanelana hafa amin'ny hafanan'ny -60 ° C - + 260 ° C (fotoana faratampony 300 ° C) miaraka amin'ny fahamarinan-toerana avo lenta, azo itokisana ary tsy mihetsika ny velarantany raha tsy miraikitra. Misorata anarana mba hamelezana ny karazan-kesika vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy na manokana ho an'ny presse vita amin'ny fantsom-baravarankely vita amin'ny vinaingitra, presse vita amin'ny laminating varavarana vita amin'ny hazo, presse vita amin'ny vera vita amin'ny vera, presse vita amin'ny laminaty avy amin'ny masoandro, presse vita amin'ny laminaty mafana ary ireo milina fanoratana karatra sns.
Teo aloha: Taratasy vita amin'ny silipo vita amin'ny silika ho an'ny fanontana lamba
Manaraka: Silicone Rubber Cushion Fa Hot Press